I-HMD Global ilungiselela iNokia entsha ngescreen esine-intshi ye-6.1 | I-Androidsis
I-HMD yeLizwe ingabhengeza iNokia yeNokia kungekudalanjengoko iFCC ivume isixhobo esitsha esineenombolo zemodeli ezininzi. Amaxwebhu esatifikethi abonisa iinkcukacha ezithile malunga nefowuni.
Inombolo yemodeli yefowuni idweliswe njenge- "TA-1188", kodwa ukwahluka kwayo kubandakanya iikhowudi "TA-1183" kunye ne "TA-1184". Iinkcukacha ezithe kratya apha ngezantsi!
Kuyakholelwa ukuba Isiphelo sendlela "TA-1188" ngumahluko okhoyo kwihlabathi oya kufumaneka kuzo zonke iimarikeNgelixa iimodeli ze- "TA-1183" kunye ne "TA-1184" ziindidi zamaIndiya nezamaTshayina ngokwahlukeneyo. Ngaphandle koko, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uguqulelo lwehlabathi "i-TA-1188" luqinisekisiwe yiKhomishini yezoQoqosho yase-Eurasian yase-Russia (i-CEE).
Isixhobo sinefayile ye- igama lekhowudi 'Wasp'. Amaxwebhu abonisa ukuba ine-3 GB ye-RAM, i-32 GB yendawo yokugcina yangaphakathi kunye ne-3.5 mm audio jack. INokia "TA-1184" ikwanayo nenkxaso ye-SIM ezimbini, i-2.4 GHz iWi-Fi kunye nenkxaso yeebhendi ze-4G LTE 2, 4, 5, 7, 12 kunye ne-17. Zonke ezi zinto ziya kuza nakwezinye iimodeli, ewe, nangona ichazwe kuphela kwesi sixhobo.
Kwelinye icala, ngokwezinye iinkcukacha ezinokufunyanwa, ifowuni ilinganisa i-145.96 mm ubude, i-70.56 mm ububanzi kunye ne-154.83 mm ngokwe-diagonally, ethi iguqulele kwi Iscreen se-intshi eyi-6.1. Ngelishwa, akukho mizobo ebonisa ukuba iza nenotshi kwaye luhlobo luni.
Ngokuqinisekileyo le yifowuni ekumgangatho ophakathi. Kukho intelekelelo yokuba le isenokuba yiyo iNokia 5.2 eya kuphumelela kwifayile ye- Nokia 5.1 ekhutshwe ngo-Agasti ophelileyo. Nangona kunjalo, sikude ekuqinisekiseni le nto ngalo mzuzu. Kungekudala siza kutyhila ulwazi oluthe kratya malunga neselfowuni ekuthethwa ngayo, kuba into yokuba ivuza emzimbeni sisalathiso esichanekileyo sokuba ilungiselela ukumiliselwa kwayo. Inokuba sizakudibana naye ngokusesikweni kwinyanga ezayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-HMD Global ilungisa iNokia entsha ngescreen esine-6.1-intshi